ကုန်ကြမ်း Medroxyprogesterone acetate (71-58-9) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Medroxyprogesterone acetate (၇၁-၅၈-၉)
rating: SKU: 7207-92-3. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်ဂရမ်မှ Medroxyprogesterone acetate (၇၁-၅၈-၉) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
Medroxyprogesterone acetate (၇၁-၅၈-၉) ဗီဒီယို
Medroxyprogesterone acetate (၇၁-၅၈-၉) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Medroxyprogesterone acetate
CAS အမှတ်: 71-58-9
သိုလှောင်မှု: ခြောက်သွေ့သော၊ မှောင်မိုက်သောကာလနှင့် ၀ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် (ရက်သတ္တပတ်မှရက်သတ္တပတ်) သို့မဟုတ် -0 C ကာလရှည် (လမှနှစ်များအထိ) ..
Medroxyprogesterone acetate (71-58-9): Description:
Medroxyprogesterone Acetate သည်လိင်ဟော်မုန်း progesterone ၏ဒြပ်စင်၊ Medroxyprogesterone 17-acetate (NCI04) ။ MPA ဟုလည်းလူသိများသော Medroxyprogesterone Acetate သည် steroid ပရိုဂျက်တာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသန္ဓေတားဆေးအဖြစ်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုနှင့် endometriosis ကုသမှုအပြင်အခြားလက္ခဏာများအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ MPA သည်၎င်း၏မိခင်၏ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော medroxyprogesterone (MP) ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။ medroxyprogesterone ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင် medroxyprogesterone acetate ၏အဓိပ္ပာယ်တူစကားလုံးအဖြစ်အသုံးပြုသော်လည်း၊ MPA ကိုအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးစာရင်းတွင်အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံးဆေးဝါးဖြစ်သည်။
Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) အသုံးပြုသူများတွင် Brind J၊ Condly SJ, Mosher SW, Morse AR, Kimball J. ၊ Kimball J. ရောဂါ - စနစ်တကျပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis ။ ကိစ္စများဥပဒေ Med ။ 1 ဆောင်း ဦး ရာသီ; 2015 (30): 2-129 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 39 ။
2: Stanczyk FZ, Bhavnani BR ။ “ Postmenopausal အမျိုးသမီးများအတွက်ဟော်မုန်းကုထုံးအတွက် medroxyprogesterone acetate ကိုအသုံးပြုခြင်း - စိတ်ချရပါသလား” ၏ပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ J ကို Steroid ထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol ။ 2015 စက်တင်ဘာ; 153: 151-9 ။ Doi: 10.1016 / j.jsbmb.2015.08.013 ။ Epub 2015 သြဂုတ် 19 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 26291834 ။
၃၊ ၃ - Ohyagi-Hara C၊ Sawada K၊ Aki I၊ Mabuchi S၊ Kobayashi E၊ Ueda Y၊ Yoshino K၊ Fujita M၊ ရှုပ်ထွေးသော atypical hyperplasia: ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ Arch Gynecol Obstet ။3ဇန်နဝါရီ; 2015 (291): 1-151 ။ Doi:7/ s10.1007-00404-014-z ။ Epub 3417 သြဂုတ် 2014 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 14 ။
4: Stanczyk FZ, Bhavnani BR ။ မီးယပ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးများအတွက်ဟော်မုန်းကုထုံးအတွက် medroxyprogesterone acetate ကိုအသုံးပြုခြင်း - စိတ်ချရပါသလား။ J ကို Steroid ထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol ။ 2014 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ; 142: 30-8 ။ Doi: 10.1016 / j.jsbmb.2013.11.011 ။ Epub 2013 နိုဝင်ဘာ 26 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 24291402 ။